AMBANJA : Nakotroka ny fankalazana rezionaly ny fetim-behivavy an’i Diana
Notanterahina tao anatin’ny distrikan’Ambanja, ny sabotsy 23 marsa lasa teo ny fankalazana rezionaly ny fetim-behivavy Diana. 24 mars 2019
Tsiahivina fa ny 8 marsa no natokana ho fankalazana maneran-tany ny andron’ny vehivavy. Araka ny fantatra dia noho ny fisian’ny fankalazana nasionaly ny fetim-behivavy tao Mahajanga dia nahemotra tamin’ io sabotsy 23 marsa io ny fankalazana rezionaly taty Diana. Samy nahatonga solontena avokoa ireo fikambanam-behivavy tao anatin’ny distrika dimy izay mandrafitra ny Faritra Diana. Naresaka sady nilamina araka izany ny fety nataon’ireo andriambavilanitra taty amin’ny tapany avaratra ny Nosy. Tonga nanome voninahitra ny fotoana Ramatoa vadin’ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta.
Filaharambe namakivaky ny tanànan’Ambanja no nisantarana ny lanonana. Samy naneho ny fahafahana mandray andraikitra amin’ny fampandrosoana, ireo vehivavin’i Diego, Ambilobe, Nosy Be, Ambanja. Indrindra tamin’izany ny fanehoana ny fitafiana avy aty avaratra, ka samy nijejojejo tamin’ny salovana sy kisaly tamin’ny ankapobeny ireo fikambanam-behivavy nandray anjara tamin’ izany, ankoatra ireo vehivavy polisy sy zandary nanao ny fanamiana maha mpitandro filaminana azy ireo. Nisy araka izany ny fitsidihana ny trano heva izay nahitana fampirantiana vokatra sy asa tanana vitan’ny vehivavy.
Amin’ny maha fety azy dia nisy ny fiaraha-misakafo sy fialana hetaheta nataon’ireo fikambanam-behivavy tsirairay, tamin’ireo toerana voatokana. Samy afa-po ireo nandray anjara tamin’ny fanaovana fety. Tonga tao avokoa ireo fikambanam-behivavy avy amin’ireo kaominina ambanivohitra ao anatin’ny distrikan’Ambanja. Araka ny fantatra dia ifandimbiasana isan-taona ao anatin’ny distrika dimy mandrafitra ny Faritra Diana ny fankalazana rezionaly. Nefa na izany dia tsy sakana ho an’ireo eo anivon’ny kaominina, distrika ny mankalaza ny fetim-behivavy amin’ny toerana misy azy.